အွန်လိုင်းကနေ လိမ်နည်းတစ်မျိုးပါ.....ယုံကြည်ရင် ၁၈ သိန်းကျော်ခံရမယ်နော် - MM Live News
အွန်လိုင်းကနေ လိမ်နည်းတစ်မျိုးပါ…..ယုံကြည်ရင် ၁၈ သိန်းကျော်ခံရမယ်နော်
October 1, 2018 MM Live News42 Comments on အွန်လိုင်းကနေ လိမ်နည်းတစ်မျိုးပါ…..ယုံကြည်ရင် ၁၈ သိန်းကျော်ခံရမယ်နော်
#အွန်လိုင်းကနေ လိမ်နည်းတစ်မျိုးပါ…..ယုံကြည်ရင် ၁၈ သိန်းကျော်ခံရမယ်နော်
ကျနော် နဲ့ သူ စတွေ.တာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ သူကျနော့်ကို လာပြီး Add တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အကောင့်တုနဲ့ပေါ့။ တစ်ကယ်တော့ ကိုယ်တွေက ဒီလိမ်နည်းကို ရင်းနှီးနေတာ ၂၀၁၀ လောက်ကတည်းက။ အဲတုန်းက အီးမေးထဲကိုဝင်လာတယ် အခုလိုမျိုးဘဲ။
အစကတည်းက သိနေပေမဲ့ သူ.ရဲ. Operation Flow ကို သိချင်လို့ အလိုက်သင့်စကားဆက်ပြောပေးလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခြားသူတွေလိုဘဲ ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုပေးတယ် ၊ ငွေလွှဲထည့်ခိုင်းတယ်။ လိမ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ကြားနေရတယ် ၊ သိနေလို. အင်းစိန်ရွာမ ရဲစခန်းကို သွားပြီးအကူအညီတောင်းကြည့်တယ် ကိုကိုရဲသားက အကိုကအလိမ်မခံရသေးတဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုမရှိသေးလို. တိုင်ချက်ဖွင့်လို. မရသေးပါဘူးတဲ့။ ကဲဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။
ဟုတ်ပြီ ကျနော် ဘာမှမဆုံးရှုံးသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသူများ ဒီပို့စ်ကိုမြင်တွေ.တယ်ဆိုရင်ဖြင့်၊ တစ်ကယ်လို.များ ဒီဘဏ်အကောင့်နဲ့တူနေတယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမှာ တိုင်ကြပါ။ အနည်းဆုံးမဖမ်းမိရင်တောင် နောက်လူတွေမခံရစေဖို့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှဲပေးစေချင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ပုံတစ်ပုံချင်းစီမှာ အဆင်ပြေသလို ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။
Daw Nandar Aung
#အှနလြိုငြးကနေ လိမနြညြးတစမြွိုးပါ…..ယုံကှညရြငြ ၁၈ သိနြးကွောခြံရမယနြော
ကနွြော နဲ့ သူ စတှေ.တာ ရိုးရှငြးပါတယြ။ အှနလြိုငြးမှာ သူကနွော့ကြို လာပှီး Add တယြ။ ထုံးစံအတိုငြး အကောငြ့တုနဲ့ပေါ့။ တစကြယတြော့ ကိုယတြှကေ ဒီလိမနြညြးကို ရငြးနှီးနတော ၂၀၁၀ လောကကြတညြးက။ အဲတုနြးက အီးမေးထဲကိုဝငလြာတယြ အခုလိုမွိုးဘဲ။
အစကတညြးက သိနပမေေဲ့ သူ.ရဲ. Operation Flow ကို သိခငွလြို့ အလိုကသြငြ့စကားဆကပြှောပေးလိုကတြယြ။ နောကဆြုံး တစခြှားသူတှလေိုဘဲ ဘဏအြကောငြ့တစခြုပေးတယြ ၊ ငှလှေဲထညြ့ခိုငြးတယြ။ လိမနြတေဲ့အကှောငြးအရာတှေ ကှားနရတေယြ ၊ သိနလေို. အငြးစိနရြှာမ ရဲစခနြးကို သှားပှီးအကူအညီတောငြးကှညြ့တယြ ကိုကိုရဲသားက အကိုကအလိမမြခံရသေးတဲ့အတှကြ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသေးလို. တိုငခြကွဖြှငြ့လို. မရသေးပါဘူးတဲ့။ ကဲဘယလြို လုပကြှမလဲ။
ဟုတပြှီ ကနွြော ဘာမှမဆုံးရှုံးသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသူမွား ဒီပို့စကြိုမှငတြှေ.တယဆြိုရငဖြှငြ့၊ တစကြယလြို.မွား ဒီဘဏအြကောငြ့နဲ့တူနတယေဆြိုရငြ သကဆြိုငရြာရဲစခနြးတှမှော တိုငကြှပါ။ အနညြးဆုံးမဖမြးမိရငတြောငြ နောကလြူတှမခေံရစဖေို့ ကိုယြ့ပတဝြနြးကငွကြို ရှဲပေးစခငွေပြါတယြ။
အငျြဂလိပစြာ အားနညြးတဲ့သူတှအတှေကရြညရြှယပြှီး ပုံတစပြုံခငြွးစီမှာ အဆငပြှသလေို ဘာသာပှနပြေးထားပါတယြ။
ငါ..ဘွဲ့မရခဲ့လို့ ဆိုပြီး စိတ်အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး…(ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်…ယူဖြစ်အောင်ယူသွားပါ)
September 22, 2018 MM Live News
ငှက်ပျောသီးစားပြီးရင် ငှက်ပျောခွံတွေကို လွှင့်မပစ်ကြနဲ့နော်..။ (သိပ်ပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်)
42 thoughts on “အွန်လိုင်းကနေ လိမ်နည်းတစ်မျိုးပါ…..ယုံကြည်ရင် ၁၈ သိန်းကျော်ခံရမယ်နော်”
I enjoy the efforts you have put in this, thank you for all the great content. generic viagra no prescription
lclygu canadian pharmacy generic viagra cheap generic drugs
purchase viagra in canada cialis generic pharmacy
I think that is among the suchalot important info for me. And i’m glad studying your article. However want to statement on some normal issues, The site taste is wonderful, the articles is in reality nice : D. Excellent task, cheers 100mg viagra
A round of applause for your article post. Cool. online pharmacy viagra
The very crux of your writing whilst appearing reasonable in the beginning, did not really work well with me personally after some time. Somewhere within the sentences you actually were able to make meabeliever unfortunately just foravery short while. I still have gotaproblem with your leaps in logic and you might do well to fill in all those gaps. If you can accomplish that, I will undoubtedly be impressed. cbdistillery reviews
jgviwj generic viagra online pharmacy cialis viagra
canadian pharmacy online viagra northwestern pharmacy canada
Do you mind if I quoteafew of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit fromalot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Cheers! viagra government funded
Kudos. An abundance of advice. lisinopril recall 2018
Nicely put. Thanks. viagra online canadian pharmacy paypal
cojjgi canada generic viagra canada drugstore
canada pharmacy viagra pharmacy rx one for cialis
YouвЂ™ve made your position extremely nicely!. viagra online canadian pharmacy
So it really seems like from the standpoint of the individuals in this business and their communications with each other that they believe theyвЂ™re selling an equal productвЂќ to what consumers would otherwise get at an area drugstore, buy generic viagra online no script he said. Compounding pharmacies that prepare human medications have been subjected to elevated scrutiny and prosecution in recent years on account of issues with contamination and improper dosages which have sickened and killed folks in Texas and nationwide.
You actually said it fantastically. acheter du viagra
Incredible many of awesome tips. buy cialis at walmart
You expressed this terrifically. cialis sans ordonnance
Try not to take this drug in bigger or littler sums or for longer than prescribed. Should you loved this short article and you would want to receive more details regarding viagra for sale assure visit the webpage. When to take your portion: Take it at aboutasimilar time every day. How should I take Vidalista 60? Unlike in stenotic cranial nerve as the proximal to hypergastrinaemia causing poor health, and prognostic information which depends on calculating and other drugs.
Many thanks. I appreciate it. pharmacie de garde
You have made your point! cialis 20mg prix en pharmacie
Physiotherapy to hospital to mutation is hypoxia, the same way in the main reason if the pill splitter cialis is variable, always try dangerous as possible. If you loved this article and you would certainly like to obtain more info concerning viagra online kindly browse through the page. Anaemia: consider cheapest cialis dosage 20mg price disease. If you experience chest pain during or after sexual activity, stop what you are doing, sit up and sit forward.
lmuboy michigan mental health code mass mental health mission mental health
mental health counseling mental health disorders disrupt everyday activities
qwnsol essentials of psychiatric mental health nursing 7th edition test bank mental health benefits of exercise what is mental health
central kansas mental health mental health counselors are typically the starting point for prescribing medications.
I don’t believe we’ve met. canadian pharmacies
dryxqp mental health assessment online may is mental health month 2017 jefferson center for mental health
mental health vs mental illness christine blasey ford mental health
You actually revealed that well. viagra cost
what dows viagra yt cheap generic viagra online amiodarone 200 mg and viagra
You revealed that wonderfully! viagra samples
You actually stated this perfectly. cheap viagra online
Wow loads of awesome information. viagra coupons
Regards. Awesome stuff. viagra without prescription
viagra how much does it cost buy real viagra online where can i buy the cheapest viagra
Wow tons of helpful advice. viagra generic
where to purchase viagra online canadian pharmacy generic viagra addyi female viagra
for him viagra online pharmacy viagra can women take viagra
when do you take viagra womens viagra viagra coupon for cvs
can women take sildenafil sildenafil generic sildenafil india
cialis while on steroids order cialis free trial for cialis